Amazon Fire TV Stick (2020), oo ah mid caadi ah oo sii shaqeynaya | War gadget
Amazon waxay leedahay aalado kala duwan oo dabka ah oo ay isku dayaan inay la kulmaan baahiyaha tiro aad u faro badan oo adeegsadayaal ah iyadoo la siinayo astaamo isku xirnaanta iyo qiime lagu hagaajiyay lacagta. Dhiniciisa, Amazon Fire TV Stick Waqti dheer ayey nagu qaadataa inaan ka dhigno telefishankeena mid "caqli badan".
Amazon waxay go'aansatay inay dib u cusbooneysiiso kala duwanaanta Fire TV Stick iyada oo la socota shey cusub oo hela wararka qaar sanadkaan 2020. Waxaan eegeynaa beddelka ugu jaban ee lagu qalabeyn karo TV-gayaga awoodo caqli leh oo leh nidaamkiisa hawlgalka, bal nala fiiri Amazon Fire TV Stick.
3 Amarku isma beddelo laakiin waa ku filan tahay
4 Khibrad adeegsade la socda
Qeybtaan, shirkadda Waqooyiga Ameerika ma aysan sameynin wax cusub hal sano dhowr sano. Amazon Fire TV Stick waxay u taagan tahay cabbirkeeda is haysta iyo in yar oo "frills" ah. Fikradda ayaa ah in ay gabi ahaanba ku qarsoon tahay telefishanka ama kormeeraha aan dooneyno inaan ku xirno, waana tan sifiican u sameysa.
Ma ka heshay? Iibso! > LINK
Waxay ka samaysan tahay caag gebi ahaanba madow ah, midabka keliya ee aan ka iibsan karno unugga, iyo waxaa ka maqan laydhadh ama faahfaahin macluumaad. Fudeydku had iyo jeer wuxuu ahaa calanka aqoonsiga ee noocan ah waxyaabaha Amazon Fire, tanina ma noqonayso mid ka reeban.
Cabirrada: X x 86 30 13 mm
Miisaanka: Gram 32
Aad iyo aad u fog, tusaale ahaan, wixii Google ka soo jeediyo iyada oo leh midab cusub oo dhalaalaya oo Chromecast ah iyo nashqado wareegsan, si sax ah kan hadda isu taagi doona inuu noqdo loolanka ugu weyn ee Amazon's Fire TV Stick marka loo eego waxqabadka iyo xitaa heerka qiimaha haddii aan barbar dhigno walaalkiis ka weyn, Fire TV Stick 4K.
Waxaan ku soo darnay sanduuqa adabtarada korontada, fiilada microUSB (haddii aad moodeyso inay dabar go'een) iyo Kordhinta HDMI taasi waxay naga caawin doontaa xaaladaha qaarkood, nuxur isku mid ah wixii aan haysanay taariikhda.
Dabka TV-ga ee Amazon Waxay ka dhigan tahay wax yar oo horumar ah qaybta farsamada marka loo eego tii ka horeysay, in kasta oo ay adag tahay in la kala saaro, xaaladdan waxaan si cad uga hadlaynaa daabacaadda timid bilawgii Sebtember 2020 iyo tan aan falanqeynay tan iyo markaas .
Si loo dhaqaajiyo nidaamka qalliinka iyo inta kale ee awoodaha farsamo ee Amazon waxay dooratay processor Bawdada-Core 1,7 GHz (Waxay korortay 0,4 GHz) midka aan xusin soo saaraha, si kastaba ha noqotee, alaabada kale ee sumadda waxaan u maleyn karnaa inay ku noqdeen sharad MediaTek. Waxaad ka iibsan kartaa 39,99 euro on Amazon (xiriiriye).
Sida keydinta gudaha, tan Fire TV Stick wuxuu leeyahay 8GB wadar ahaan, loogu talagalay badanaa codsiyada, maaddaama ku xirnaanta microUSB-ka kombuyuutarka ay noqon karto mid dhibaato leh iyadoon aqoonta lagama maarmaanka u ahayn. Dhinaceeda, waxaan leenahay IMG GE8300 GPU mas'uul ka ah bixinta waxyaabaha aan ka kooban nahay Full HD 1080p, xalka ugu badan ee ay taageerto. Waxaan haynaa 1GB RAM.
Waxaan haynaa Dual Antenna WiFi (MIMO) waxay taageertaa shabakadaha 2,4 GHz iyo 5 GHz, wax isbeddelay waqti ka dib, sida Bluetooth 5.0 oo loogu talagalay wadaagista nuxurka iyo BLE ee qalabka.
Waxaan haynaa qaabab badan oo fiidiyoow ah, HDR 10, HDR10 +, HLG, H.265, H.264 iyo Vp9 ilaa iyo inta TV-gayagu si buuxda isula jaan qaadayo, dabcan. In kasta oo aan la xusin Dolby Vision, waxaan u maleyneynaa taas sababo la xiriira arrimaha boqortooyada. Si kastaba ha noqotee, codka waxaan ku helnaa saxiixa calaamadda, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital + dhawaaqa hareeraha iyo maqalka oo loo maro HDMI ee Dolby Digital, Dolby Digital + iyo Dolby Atmos.
Ku saabsan sawirka, waxaan haysan doonaa ugu badnaan 60 FPS waxyaabaha ku jira HD iyo tayada hoose labadaba, waa wax la tixgeliyo. Waxaan haddaba la kulannaa jiilka saddexaad ee Fire TV Stick.
Amarku isma beddelo laakiin waa ku filan tahay
Xaaladdan oo kale, amarku wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku maamulno Alexa, kaaliyaha dalwaddii ee shirkadda Jeff Bezos, iyadoo loo marayo xakamaynta codka. Fogaanta fog waxay cabirkeedu yahay 38 x 142 x 16mm oo aan beytar lahayn culeyskiisu waa 43 garaam.
Si aan u isticmaalno waxaan u baahan doonaa laba baytariyada AAA kuwaas oo si fudud loo dhex gelinayo nidaamka hoose. Intaa waxaa dheer, baytariyadaan ayaa lagu soo daray baakadka, waa wax maskaxda lagu hayo, maadaama aysan dhammaan noocyadu bixin faahfaahintaan fudud.
Qalabkaani wuxuu ka shaqeyn doonaa labadaba Bluetooth iyo infrared, Xaqiiqduna waxay tahay in mid ka mid ah faa'iidooyinkiisa ay tahay inaan awood u yeelan doonno inaan si toos ah ugu xakameyno telefishinka aaladda kontoroolka haddii aan doono, iyadoo leh badhanka xiritaanka gaarka ah ee telefishanka, waana wax aan ku qaddarin doonno isticmaalkiisa maalinlaha ah.
Sida ku saabsan tilmaamaha codka, way ka badan tahay in ku filan makarafoonkeeda ku yaal qaybta dhexe ee sare. Qeybtaan, xakamaynta Fire TV Stick ayaa waqti sii kordheysay, laakiin wali waxay leedahay badhano laga yaabo inay si xad dhaaf ah u adkaadaan ama tayo ahaan si hoose u hooseeya marka la barbardhigo telefishanada dhexe iyo kuwa sare, oo ah wax sumcadda u leh khibradaha isticmaalaha. Si kastaba ha noqotee, Samsung TV-ga waxaan ku aragnaa inaan ka dhigi karno inuu si toos ah ula shaqeeyo mas'uulka fog.
Khibrad adeegsade la socda
Sida had iyo jeer, tan TV-ga ah ee loo yaqaan 'Fire TV Stick' oo ka socota Amazon Waxay leedahay lakab habeyn ah oo dusha sare ah ee Android. Nidaamku wuu socdaa oo si fiican ayuu u qabtaa, isagoo bixiya khibrad aad u fiican oo adeegsade ah, oo ka sarreeya wixii aan ka filan karno xakamaynta Laakiin tani waa wax ay halyeeyadii hore ee Fire TV Stick kala durkeen.
Aad ayey u fududahay in la isku rakibo, sida had iyo jeer, qasabado yar oo fudud laguna xirayo koontadayada Amazon, waxaa naloo soo bandhigi doonaa soo degsashada barnaamijyada waaweyn sida Movistar +, Spotify ama Netflix, marka lagu daro kuwa horay loo sii rakibay sida Amazon Prime Video. Waxaan aad ugu boorinayaa in loo raadsado biraawsar kale sida Firefox.
Markaad gudaha gasho, waa inaad ku raaxeysataa, waxaan rakibi karnaa codsiyo aad u tiro badan khibradduna waxay sii wadaa inay ka sarreyso kuwa la tartamaya, gaar ahaan haddii aan tixgelinno qiimaha. Dhab ahaan, waxqabadka ayaa ka sarreeya kan ay bixiyaan inta badan telefishinnada Samsung iyo LG, tusaale ahaan, taasoo ka dhigeysa lammaane dagaal ku habboon.
Telefishinka dab damiska
Is haysta iyo mid yar
Waxay ku dhaqaaqdaa dheecaan xad dhaaf ah
Qiimaha waa laga adkaan karin
Codsi weyn Candida
Maamulaha dhismuhu wuxuu xumeeyaa khibrada
Mudnaan aad u badan si aad u lahaato waxyaabaha ku jira OS
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Amazon Fire TV Stick (2020), oo heer sare ah oo shaqada sii socota
LG 32UL950-W, kormeere 4K ah oo aad u fara badan [Dib u eegis]